Sirna gadaa oromoo pdf file
Aadaa sana keessaa immoo amantiin maddee maal akka fakkaatu kophatti ilaalla. Fakkeenyaaf boorana keessatti qaalloota laduu shana jiran kan maxxaarrii sadaniifi kan karrayyuu tokkoofi kan odituu tokko keessaa hunda caala kabajaman qaalluu odituuti. Keessattuu mallattoo tokkummaa, nagaa fi bilisummaa ummata oromoo kan tae aadaan sirna gadaa oromoo. Jaalala bituu hin yaalin jaalalli siin haabitu malee. Kana jechuun warri miseensa gadaa harmufaa baallii. Definition the gadaa system is an indigenous egalitarian democratic system practiced among the oromo nation of east africa for the last six hundred years. Ummanni oromoo akkataa waaqa galateeffatu fi ilaalcha amantii isaa ibsatu aadaa bareedaa fi boonsaa qabna. The surviving oromo who used to enjoy an egalitarian democracy known as the gadaa system were forced to face state terrorism, political repression, and an impoverished life. Waggoota 45 oliif sirna gadaa kan qoratan hayyuun aantiroopolojii piroofeesar asmaroom. Posts about sirna gadaa oromo written by oromianeconomist. Bara gadaa kanaa oromoon jalqabaaf abbaa duulattiin of ijaaree, akka kana duraa yeroodhuma ormi ittidhufu. Aadaa amantee ummata oromoo isa ganamaa keessaatti ayyaanni guddaan irreecha irreessa.
Odaa fi sirna gadaa oromoo ummatni oromoo hortee latiinsa hidda kuush keessaa isa guddaa fi baha afrikaatti ummata baldhina qabu yoo tau waggoota kumaatama dura sirna gadaatiin buluu kan jalqabeefi karaa nageenyaatiin lafa quubsumaa, dheedaa fi hora horii isaaniitiif tolu akkasumas qilleensa jiruuf jireenya isaaniitiif mijaau filachaa dhiibbaa tokko malee lafa duwwaa ilaalee. Afaan oromoo barachuu barbaadduu, afaan oromoo jaalattuu. The main objective of this research is, therefore, to respond to the search of alternative. Sirna gadaa oromoo oromia culture and tourism bureau. The people of oromo have an extensive and very rich. Qorannoon kun haala sirni gadaa naffuroo fookloorii keessatti calaqqisu. Dhiibbaa sana hunda keessa darbee hara of cimsee abbootii gadaa. Dubaa ati enyuu akka taatte danddetti kee fi yaadaa ati oromoo fi qabsoo oromoof qabduu. Ayyaanni irreechaa kan ummanni oromoo baldhan malkaatti walitti dhufee waaqa tokkicha ganna dukkanahaa dabarsee birraa ifaa fi gammaachisaa nagaan marsee nuuf fide galaateeffata. Waltajjiidhan qorannoo research centers afaan, aaadaa, seenaa fi sirna gadaa oromoo ijaaruu dhaabuu fi seenaa saba oromoo kan dabre qorachuu, barachuu, barsiisuu fi guddisuu.
Waaee gadaa wantoota beekuu qabdan shan bbc news afaan. Sirna gadaa keessatti wanni hundi gadaan walilaala. Xiinxala sirna gadaa naffuroo fookloorii oromoo keessatti. Dhaloonni oromoo sirna gadaatiin bulu yeroo hunda gadaa keeessa jira. The gadaa system is an indigenous egalitarian democratic system practiced among the oromo nation of east africa for the last six. Caaseffama sirna gadaa oromoo sirni gadaa jaarmiyaalee damee siyaasaa, diinagdee, hawaasummafi amantii sabni oromoo keessatti gurmaauudhaan jiruufi jireenya isaa guyyaa guyyaa sirnaan gaggeessatu akka taeedha. Gadaan sirna ittiin siyaasni, dinagdeenii fi hawaasummaan ummata oromoo ittiin murteeffamu, kan miseensi sabichaa mirgaa fi dirqama isaa beekee ittiin walii galuu fi tokkummaan ittiin waliin jiraatudha. The announcement of a possible first archaeoastronomical site called namoratunga ii in subsaharan africa by lynch and robbins 1978 and its subsequent reappraisal by soper 1982 have renewed interest in an east african calendrical system, the borana calendar, first outlined in detail by legesse 1973. Bridging indigenous institutions of governance to modern democracy came into focus. The basic rule of the gada system is that the newly born infant child always enters the system of grades exactly forty years after his father, regardless of the age of the son or the father. Fakkeenyaaf boorana keessatti qaalloota laduu shana jiran kan maxxaarrii sadaniifi kan karrayyuu tokkoofi kan odituu tokko keessaa hunda caala. Saba oromoo fi sirna gadaa the history of the oromo nation and. Sirna gadaa keessattiis ummanni oromoo aadaa walii galatti bifa armaan olii kitwaba akka qabu, aadaa kanarraahiis qaroomni ummata oromoo kalandara mataa isaa qabaachutti akka geesse hubanna. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba.
Gadaan jaarmiyaa umurii fi dhalootan ijaarame yoo tau, sirna bulchiinsaa diimokiraatawaadha. Hawaasa oromoo bara gadaa keessaa yoo fudhannee akkaataa jiruufii jireenya oromoo, akkaataa qoodama dalagaa, hariiroo ummanni oromoo hawaasa keessatti waliinqabau, sirna gadaa keessatti qaama tokko. Bbc afaan oromoo hayyuu kana waliin turtii taasisee kunooti. Koottaa walwajjiin barree wal barsiifnaa, hawaasni oromoo fi jaalattoonni afaan kanaa iddoma jiran taaanii afaan oromoo akka baratan. Gadaan tuulamaa gochaa bara dheeraaf irratti gaggeeffame kanaan baduu hin dandeenye. Asmaroomiin waabeffatee akka ibsetti, gadaan sirna waan mara of keessatti qabuufi jireenya oromoo kallattii maraan sakattaudha. Gulantaa irra jirurratti mirgaa fi dirqama aangoon gadaa kenneef hojiitti hiika namni.
34 661 538 153 951 3 495 966 1219 1302 652 858 463 1442 745 1125 403 1187 1311 970 1147 623 1300 562 758 736 477 453 198 836 1333 1288 1076 1296 161 374 826 741 1231 276 1026 1091 1261 797